ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးစိန်ခေါ်မှုများကို ကိုင်တွယ်ရန် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အဆိုပြုချက် သမ္မတ ရှီကမ်းလှမ်း - Xinhua News Agency
လက်ဘနွန်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်းတွင် ပြုလုပ်သော ဆုတံဆိပ်ချီးမြှင့်ခြင်းအခမ်းအနား၌ ကုလသမဂ္ဂ ငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှုဆုတံဆိပ် လက်ခံရရှိသော လက်ဘနွန်အခြေစိုက် ကုလသမဂ္ဂယာယီတပ်ဖွဲ့မှ တရုတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇွန် ၁၆ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသည် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါအရိပ်အောက်မှ လွတ်မြောက်စပြုလာချိန်တွင် ယူကရိန်းပဋိပက္ခကြောင့် စိန်ခေါ်မှုများဖြင့် ထပ်မံ ရင်ဆိုင်ရပြန်သည်။တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်သည် ငြိမ်းချမ်းရေးလိုအပ်မှုကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အဆိုပြုချက်ကို တင်သွင်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ရှီသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ် အာရှဒေသဆိုင်ရာ ဘိုးအောက်ဖိုရမ် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား၌ မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးအဆိုပြုချက် (GSI) ကို ပထမဆုံးအကြိမ် အဆိုပြုခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ မြို့တော်ပေကျင်းရှိ ထျန်းအန်းမင်ရင်ပြင်တွင် ခိုများလွှတ်နေသည်ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၁ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
သမ္မတ ရှီက လွန်ခဲ့သော ၈ နှစ်အကြာက အများနှင့်ဆိုင်၍ ဘက်စုံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ရေရှည်တည်တံ့သောလုံခြုံရေး မျှော်မှန်းချက်အပေါ် တည်ဆောက်ထားသော အဆိုပြုချက်နှင့်ပတ်သက်၍ ညီမျှ၍ ထိရောက်မှုရှိပြီး ရေရှည်တည်တံ့သော လုံခြုံရေးဗိသုကာတစ်ခု ထူထောင်ရေး မြှင့်တင်ရန် ရှာဖွေလျက်ရှိသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ဟိုင်နန်ပြည်နယ်၊ ဘိုးအောက်မြို့တွင် အာရှဒေသဆိုင်ရာ ဘိုးအောက်ဖိုရမ် (BFA) နိုင်ငံတကာကွန်ဖရင့်အား ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဧပြီ ၁၉ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
အဆိုပါနှစ်များအတွင်း ရှီသည် ၎င်း၏ လုံခြုံရေးမျှော်မှန်းချက် မြှင့်တင်လျက်ရှိပြီး နိုင်ငံတကာ အခမ်းအနားများစွာ၌ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖော်ပြပြောကြားခဲ့သည်။ ယင်းအချက်အပေါ် သမ္မတ ရှီ၏ မှတ်ချက်များအနက် အချို့ကိုကောက်နုတ်ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ် မေ ၂၁ ရက်
ရှန်ဟိုင်းမြို့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော အာရှထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် တုံ့ပြန်မှုနှင့် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေး ဆောင်ရွက်ချက်များဆိုင်ရာ ကွန်ဖရင့်၌ ပြောကြားခဲ့သော ၎င်း၏ မိန့်ခွန်းတွင် ရှီက “ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ပြောင်းလဲနေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်နေသောအချိန်ကာလများကို ထိန်းသိမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ စစ်အေးခေတ်နဲ့ ဘယ်သူမှအနိုင်မရတဲ့ ကစားပွဲရဲ့ ခေတ်မမီတော့တဲ့ အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ ၂၁ ရာစုမှာ ဘယ်သူမှမနေနိုင်ပါဘူး”
“အာရှမှာ အများနှင့်ဆိုင်၍ ဘက်စုံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ရေရှည်တည်တံ့သောလုံခြုံရေးကို ထောက်ခံဖို့လိုအပ်တယ်လို့ ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လုံခြုံရေးအယူအဆကို ဆန်းသစ်ဖို့၊ ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဗိသုကာအသစ်ကို ထူထောင်ဖို့နဲ့ မျှဝေမှုရှိပြီး အားလုံးအတွက် အကျိုးအမြတ်ရှိသော အာရှလုံခြုံရေးအတွက် ပူးတွဲတည်ဆောက်ဖို့ လိုပါတယ်” ဟု ရှီက ပြောကြားခဲ့သည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက် (ဆင်ဟွာ)
၈၆ ကြိမ်မြောက် အင်တာပိုအထွေထွေညီလာခံ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား၌ မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင် ရှီက “နိုင်ငံများအနေဖြင့် အများနှင့်ဆိုင်၍ ဘက်စုံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ရေရှည်တည်တံ့သောလုံခြုံရေး အယူအဆကို လက်ခံကျင့်သုံးသင့်ပြီး လုံခြုံရေးစိန်ခေါ်မှုများစွာကို ပူးတွဲတုံ့ပြန်သင့်ပါတယ်” ဟု ပြောခဲ့သည်။
သာတူညီမျှ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုရှိပြီး ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြင့်ကမ္ဘာ့လုံခြုံရေး စီမံအုပ်ချုပ်မှုကို မြှင့်တင်ရာတွင် “နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်လုံခြုံရေးကို ထိန်းသိမ်းနေစဉ်မှာပဲ အခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ လုံခြုံရေးကိုလည်း ထည့်သွင်းလုပ်ဆောင်သွားသင့်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၂၅ ရက်
တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ ဂျိုဟန်နာဘတ်စ်မြို့တွင် ကျင်းပသော ၁၀ ကြိမ်မြောက် BRICS ထိပ်သီးအစည်းအဝေး၊ စီးပွားရေးဖိုရမ်တွင် BRICS နိုင်ငံများအနေဖြင့် အများနှင့်ဆိုင်၍ ဘက်စုံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ရေရှည်တည်တံ့သောလုံခြုံရေးကို မြှင့်တင်ရန် ရှီက ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် BRICS အဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုမှတစ်ဆင့် အားလုံးနှင့် ဆက်စပ်သောကိစ္စရပ်များကို ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်သင့်ပြီး လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့် အာဏာနိုင်ငံရေးကို ဆန့်ကျင်သင့်ကြောင်းလည်း ရှီက အလေးထားပြောခဲ့သည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ် ၂၆ ရက်
ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပဲရစ်မြို့တွင် ကျင်းပသော တရုတ်-ပြင်သစ် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီမံအုပ်ချုပ်မှုဖိုရမ် ပိတ်ပွဲအခမ်းအနား၌ တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်က ငြိမ်းချမ်းရေးလိုအပ်မှုကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် ပူးတွဲကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများနှင့် အပြန်အလှန် ကူညီမှုအတွက် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းမှာ အများနှင့်ဆိုင်၍ ဘက်စုံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ရေရှည်တည်တံ့သောလုံခြုံရေး မျှော်မှန်းချက်အသစ်ကို ထိန်းသိမ်းရန်၊ စစ်အေးခေတ်နှင့် မည်သူအတွက်မှ အကျိုးမရှိသော စိတ်သဘောထားများကို ပယ်ဖျက်ရန်၊ တောတွင်းဥပဒေသဘောတရားကို ဖယ်ရှားရန်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးအဓိပ္ပါယ်များဖြင့် ပဋိပက္ခများကို ဖြေရှင်းရန် အကြံပြုထားကြောင်း ရှီက ပြောခဲ့သည်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက်
တရုတ်နိုင်ငံ ပေကျင်းမြို့တွင် ရှန်ဟိုင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့၊ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်များကောင်စီ၏ ၂၀ ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးတွင် မိန့်ခွန်းပြောကြားရာ၌ ရှီက “ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ လုံခြုံရေးနှင့် တည်ငြိမ်းရေးကို ထိန်းသိမ်းဖို့နဲ့ အားလုံးအတွက် လုံခြုံရေးအသိုက်အဝန်းတစ်ခု တည်ဆောက်ဖို့ လိုပါတယ်” ဟု ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
“လုံခြုံရေးနဲ့ တည်ငြိမ်ရေးက နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု နံပါတ် ၁ ပဲဖြစ်ပြီးတော့ နိုင်ငံအားလုံးရဲ့ ပင်မအကျိုးစီးပွားနဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်” ဟု ရှီက ပြောခဲ့သည်။ “ကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့ အများနှင့်ဆိုင်၍ ဘက်စုံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ရေရှည်တည်တံ့သောလုံခြုံရေး မျှော်မှန်းချက်အပေါ် ကျင့်သုံးဖို့၊ ခြိမ်းခြောက်မှုနှင့် စိန်ခေါ်မှုပုံစံများအားလုံးကို ထိရောက်စွာ ကိုင်တွယ်ဖို့နဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဒေသတွင်းမှာ ခိုင်မာတဲ့ လုံခြုံရေးပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု မြှင့်တင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောခဲ့သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၃ ရက်
ဆဌမအကြိမ်မြောက် အရှေ့ပိုင်းစီးပွားရေးဖိုရမ်၊ မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေး ဖွင့်ပွဲအခမ်း၌ မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင်လည်း ရှီက ဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တည်ငြိမ်ရေးကို ထိန်းသိမ်းရန် စုပေါင်းအင်အား ဖွဲ့စည်းရန် နိုင်ငံများအားလုံးကို ပြောကြားခဲ့သည်။
နိုင်ငံများအားလုံးအနေဖြင့် ကွဲပြားခြားနားမှုများကို ကျဉ်းမြောင်းစေရန်၊ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုနှင့် ဖလှယ်မှုများမှတစ်ဆင့် သဘောတူညီချက် ထူထောင်ရန်၊ အများနှင့်ဆိုင်၍ ဘက်စုံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ရေရှည်တည်တံ့သောလုံခြုံရေး အယူအဆကို ဆုပ်ကိုင်ရန်နှင့် ကျွန်တော်တို့ အားလုံးအတွက် သဟဇာတဖြစ်၍ အေးချမ်းသော အမိမြေ ဖော်ဆောင်ရန် လိုအပ်ကြောင်းလည်း ရှီက ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီ ၂၁ ရက် (ဆင်ဟွာ)
၂၀၂၂ ခုနှစ် အာရှဒေသဆိုင်ရာ ဘိုးအောက်ဖိုရမ် နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေး၌ ပြောကြားခဲ့သည့်မိန့်ခွန်း၌ ရှီက ကမ္ဘာကြီးတွင် အားလုံးအတွက် လုံခြုံရေးမြှင့်တင်ရန် GSI ကို ထည့်သွင်းအဆိုပြုခဲ့သည်။
“အများနှင့်ဆိုင်၍ ဘက်စုံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ရေရှည်တည်တံ့သောလုံခြုံရေးကို ကတိပြုထားဖို့နဲ့ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိန်းသိမ်းရေး အတူတကွဆောင်ရွက်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်” ဟု ရှီက ပြောခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ရှီက “နိုင်ငံအားလုံးအနေနဲ့ တရားနည်းလမ်းကျသော လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို အလေးထားဆောင်ရွက်ဖို့၊ မမြင်တွေ့နိုင်သောလုံခြုံရေး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကို ထိန်းသိမ်းဖို့၊ ညီမျှ၍ ထိရောက်မှုရှိပြီး ရေရှည်တည်တံ့သော လုံခြုံရေးဗိသုကာ တည်ဆောက်ဖို့နဲ့ တစ်နိုင်ငံ၏ လုံခြုံရေးကို အခြားသောနိုင်ငံများ၏ လုံခြုံရေး၌ ထည့်သွင်းခြင်းကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ဖို့” ပြောကြားခဲ့သည်။
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မေ ၁၉ ရက် (ဆင်ဟွာ)
BRICS နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေး ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား၌ ဗီဒီယိုမိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင် ရှီက အားလုံးအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးအသိုက်အဝန်းတည်ဆောက်ရန် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
Source: XinhuaEditor: huaxia2022-05-24 11:30:36
BEIJING, May 24 (Xinhua) — Global peace and development is faced with challenges posed by the Ukraine crisis atatime when the world has yet to emerge from the shadow of the COVID-19 pandemic.
To tackle the peace deficit, Chinese President Xi Jinping has put forward China’s proposal. In his keynote speech at the opening ceremony of the Boao Forum for Asia Annual Conference 2022, Xi proposed for the first time the Global Security Initiative (GSI).
In his keynote speech delivered at the fourth Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia Summit held in Shanghai, Xi said: “We need to keep pace with the changing circumstances and evolving times. One cannot live in the 21st century with the outdated thinking from the age of Cold War and zero-sum game.”
“We believe that it is necessary to advocate common, comprehensive, cooperative and sustainable security in Asia. We need to innovate our security concept, establishanew regional security cooperation architecture, and jointly buildaroad for security of Asia that is shared by and win-win to all,” he said.
While addressing the opening ceremony of the 86th Interpol General Assembly, Xi said that “countries should adoptaconcept of common, comprehensive, cooperative and sustainable security, and jointly respond to security challenges.”
He called for promoting global security governance inamore fair, reasonable and effective way, saying: “Countries, while maintaining their own security, should take into account other countries’ security.”
While addressing the 20th meeting of the Council of Heads of State of the Shanghai Cooperation Organization in Beijing, Xi said: “We need to safeguard security and stability and buildacommunity of security for us all.”
“Security and stability are the number one precondition foracountry’s development, and thus concern the core interests of all countries,” he said, adding: “We need to act on the vision of common, comprehensive, cooperative and sustainable security, address all forms of threats and challenges effectively, and fosterasound security environment in our region.”
“It is important that we stay committed to the vision of common, comprehensive, cooperative and sustainable security, and work together to maintain world peace and security,” Xi said.
He also called for “taking the legitimate security concerns of all countries seriously, uphold the principle of indivisible security, buildabalanced, effective and sustainable security architecture, and oppose the pursuit of one’s own security at the cost of others’ security.”
When deliveringavideo address at the opening session of the BRICS Foreign Ministers’ Meeting, Xi called for buildingaglobal community of security for all.■
Photo 1 : Soldiers on the Chinese contingent to the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) are awarded the United Nations Peacekeeping Medal duringamedal parade ceremony in southern Lebanon, June 16, 2021. (Photo by Liu Xiongma/Xinhua)
Photo2: Doves are released to the sky at Tian’anmen Square in Beijing, capital of China, July 1, 2021. (Xinhua/Sun Fei)
Photo3: Photo taken on April 19, 2022 shows the Boao Forum for Asia (BFA) International Conference Center in Boao, south China’s Hainan Province. (Xinhua/Yang Guanyu)
ဘိုင်ဒန်၏ အာရှတိုက်ခရီးစဉ်သည် ဒေသတွင်းမတည်ငြိမ်မှုများကို အားပေးရာရောက်